XOG RASMI AH-Ciidamo, Siyaasiyiin iyo Isimo Dhaqaale Ku Qaatay Carqaladaynta Shirkii Madasha oo Fashilmay.
Puntlandnews.net (Garoowe)-Magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland ayaa maanta waxaa lagu soo afmeeray shirkii madasha madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federalka ah ee Soomaaliya oo 4 maalmood ku shirsanaa magaalada Garoowe.
Shirkaan oo intiisa badan diiradda lagu saarayey xaaladda guud ee Soomaaliya gaar ahaan arrimaha ammaanka, dhaqaalaha, siyaasadda, deeqaha caalamiga ah, khayraadka dabiiciga ah, doorashooyinka, khilaafka madaxda Soomaalida iyo arrimo kale ayaa waxaa siweyn uga soo horjeedey Villa Somalia.
Madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan xafiiska ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dedaal dheeraad ah ku bixiyey sidii shirkaasi ay shacabka Puntland uga hor imaan lahaayeen isla markaana loo abuuri lahaa shabakado ka soo horjeeda oo shacabka kiciya.
Ciidamada ammaanka Puntland ayaa fashiliyey dedaalo shaqsiyaad dhaqaale ka qaatay Muqdisho oo doonayey inay abaabulaan dibad baxyo iyo shirar jaraa’id oo ka dhan ah shirka madasha ee magaalada Garoowe, waxaana intaasi dheeraa saraakiil hore iyo siyaasiyiin u xusul duubayey kahor imaanshaha shirkaasi.
Gedood ciidan oo ka dhacay Garoowe maalin kahor furitaanka shirka madasha, saraakiil Garoowe warbaahinta kula hadlay oo afka dowladda federalka ah ku hadlayey kana soo horjeedey shirka iyo kulamo kale oo qarsoodi ah ayaa qayb ka ahaa qorshayaashaasi.
Sidoo kale, waxaa jirey siyaasiyiin, odayaal iyo dhalinyaro warbaahinta siyaabo kala duwan uga hadlay oo dhammaantood ay ka muuqanaysay inaysanba u dhuun daloolin xaqiiqada kajirta Soomaaliya haseyeeshee la marsanayey farriimo gaar ah.